Ampidino ny azo antoka turnkey PCB fiangonana mpanamboatra
PCBFuture dia nanangana ny lazantsika tsara amin'ny indostrian'ny serivisy fivoriambe PCB turnkey feno ho an'ny fivoriambe PCB prototype sy ambany ambany, tapany fivorian'ny PCB. Ny zavatra tokony hataon'ireo mpanjifantsika dia ny mandefa ny fisie PCB sy ny takiana amintsika, ary afaka hikarakara ny ambin'ny asa izahay. Azontsika atao tanteraka ny manolotra serivisy PCB tsy azo resena fa mitazona ny vola lany ao anatin'ny teti-bolanao.
Fivorian'ny birao vita pirinty turnkey ao anatin'izany: famokarana PCB, fizarana singa, SMT PCB Assembly, fanandramana sy fandefasana. Ny serivisy fivoriambe PCBFuture an'ny turnkey PCB dia mikendry ny hanome drafitra fivarotana PCB mijanona iray izay afaka mitsitsy vola, fotoana ary fahasosorana. Matihanina sy azo antoka no lakilen'ny fahombiazan'ny fivorian'ny PCB turnkey, ireo ihany no ananantsika. Azontsika atao ny manome serivisy malefaka miaraka amina fifandraisana tokana, midika izany raha manana ekipa injeniera za-draharaha miverina. Ny serivisy fivoriambe PCBFuture an'ny PCBFuture no safidy voalohany ho an'ny orinasa kely, orinasa lehibe ary mpandraharaha.
Ny tombony azo amin'ny serivisy Turnkey PCB Assembly anay
Tao anatin'izay taona lasa izay dia mihabetsaka ny mpanjifa mampiasa ny serivisy fivoriambe pcb an'ny turnkey, ary ny ankamaroan'izy ireo dia manangana fiaraha-miasa maharitra amintsika. Azontsika atao ny mitantana ny fizotrany rehetra ao anatin'izany ny PCB Manufacturing, Components Sourcing, PCB Assembly, Testing ary fandefasana farany. Ny mpanjifanay dia afaka mifantoka amin'ny famolavolana vokatra sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Tombony 1: Vendor mora entina
Ho an'ny serivisy fivoriambe turnkey PCB, ao anatin'izany ny PCB manufacturing, Components Sourcing, fivoriambe PCB sns ... Raha mampiasa mpivarotra marobe ho an'ny tsirairay amin'izy ireo isika dia mety ho be loatra, indrindra rehefa miparitaka erak'izao tontolo izao izy ireo. Ary koa ny tsy fifandraisan-davitra sy ny fahatarana eo amin'ireto mpivarotra ireto dia mety hitondra olana betsaka aminao. Fa raha misafidy anay ho mpamatsy elektrika turnkey ianao dia manana fifandraisana iraisana tokana ianao hiaraha-miasa ary afaka manampy anao betsaka amin'ny fitantanana tetik'asa izahay.
Tombony 2: tahiry amin'ny vidiny
Ny mpivarotra mpivady dia midika fa mila fotoana roa ianao amin'ny fandefasana, mpanamboatra fivoriambe iray pcb dia hanampy anao hanafoana ny vidin'ny fandefasana. Ankoatra izany, ny mpamatsy matihanina tokana dia hahatonga ny asanao hahomby kokoa, afaka manampy anao hampihena ny fandanianao ny fitantanana anatiny izany. Mahatonga ny fitantanana ifotony ny baiko, ny asanay dia hahomby ary hampihena ny vidiny.
Tombony 3: ahena ny lesoka sy ny fotoana
Raha misy mpivady mpamatsy hihaona amin'ny serivisy fivorianao PCB, dia ho mora kokoa ny hipoitra ny tsy fahazoan-kevitra ary mila fotoana bebe kokoa amin'ny fifandraisana, indrindra rehefa misy ny fe-potoana sy ny sakana amin'ny fiteny. Ho an'ny mpamatsy fivoriambe turnkey pcb, ny forongony, ny famokarana ary ny fivorian'ny sampana dia mahalala ny fomba hiarahan'izy ireo manapaka ny lesoka, ny vidiny ary ny fotoana.
Tombony 4: malefaka kokoa mifanaraka amin'ny filàn'ny PCB Assembly
Na mila fiangonana prototypot PCB ianao na fivoriambe PCB andiany kely sy antonony dia afaka mamaly ny zavatra ilainao amin'ny ankapobeny izahay satria manana departemanta famokarana roa ho azy ireo. Amin'izany fomba izany dia mety hialana amin'ny olana raha ny vokatrao amin'ny fizotry ny famokarana betsaka, satria samy manana ny rakitsoratry ny fampahalalana rehetra izahay.
Raha ny momba ny tetik'asa fivorian'ny PCB turnkey rehetra sy ny mpanjifa dia hanana olona voatendry manokana tompon'andraikitra amin'izany izahay, koa raha manana takiana fanampiny toy ny fitsapana, ny lisitra, ny fonosana na ny fandefasana entana ny mpanjifa dia afaka mifanena amin'izy ireo izahay.
Ny zava-dehibe indrindra aminao dia ny mahita ny mpiara-miasa mety, mpanamboatra fivoriambe PCB azo antoka dia hanampy anao hamokatra vokatra avo lenta ary hamidy azy haingana any amin'ny tsena. Izahay no mpanome elektronika turnkey azonao itokisana.
Makà fanangonana fivoriambe PCB haingana avy aminay
Raha mitady mpanamboatra fivoriambe Turnkey PCB mety ianao dia alefaso ny rakitra BOM sy ny rakitra PCB anao sales@pcbfuture.com . Tsiambaratelo tanteraka ny rakitrao rehetra. Handefa anao teny nalaina marimarina izahay miaraka amin'ny fotoana fitarihana ao anatin'ny 48 ora.